voices on current conflict | MoeMaKa Burmese News & Media
ရခိုင်ဒေသအရေး စာကိုး၊ စကားကိုး
3 Responses to voices on current conflict
T S Win on June 10, 2012 at 3:01 pm
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဖြစ်သည်ဟု မျက်စေ့စုံမှိတ်ထောက်ခံပြော ဆိုနေခဲ့ကြသူများ အားလုံးကိုလည်း ယခုရိုဟင်ဂျာအရေးအခင်း၌ ပြတ်သားစွာ ရပ်တည် ကြပါရန်
မြန်မာတိုင်းရင်းသား အရေးကိစ္စများကို ဖော်ပြရာတွင် မလိုလားအပ်သော လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ဖြစ်စဉ်အမှန်များကို တိတိကျကျ ဖော်ပြရန်
BBC, AFP အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ သတင်း မီဒီယာများအနေဖြင့်လည်း ဘင်ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာတိုင်းရင်သားများတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသည်ကို တိကျစွာဖော်ပြရန်
နိုင်ငံကြီး တွေကနေပြီးတော့ ဒီအားနည်းတဲ့နိုင်ငံက ဒီပြဿနာကို လက်ခံရမယ်လို့ ဖိအားပေးနေတာမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ လုံးဝ သည်းခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
U AYE on June 10, 2012 at 3:19 pm
This is the great challenge to our government, people and nation. The problem is complicated and need to tackle carefully without emotion. But we had good advatage for national reconcillation. All organizations (social and religious), all political parties and all races have to support to government and overcome the outlaw destructive groups.
T S Win on June 10, 2012 at 3:25 pm
အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းပင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကိုဖျောက်၍ ရိုဟင်ဂျာ(မွတ်စလင်) တိုင်းရင်းသားများကို မြေပုံဆွဲ၍ စတင်ဖော်ပြခဲ့သော သူများသည် ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုအေ၊ ဘာမားကမ်ပိန်း (ယူကေ) စသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြစ်တွယ်စပြုနေသော ဘင်္ဂါလီပြဿနာကို မီးစာကောင်းကောင်းနှင့် တောက်လောင် နိုင်အောင် ထပ်ဆင့်မီးညှိပေးခဲ့သောသူများမှာ ဘင်္ဂါလီများကိုယ်တိုင် မဟုတ်ဘဲ ဘီဘီစီ၊ ဘားမားကမ်းပိန်း(ယူကေ)နှင့် မဇ္ဈိမစသည့် သတင်းဌာနများ ဖြစ်နေသည် ထိုမဖြစ်နိုင်သော ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ကမ္ဘာသိအောင်လုပ်၍ လူမျိုးခြား ရိုဟင်ဂျာများနှင့် မြန်မာလူမျိုးများ ပြဿနာဖြစ်လာလျှင် သူတို့ဆင်ထားသော အကွက်ထဲသို့ ၀င်မှန်းမသိ ၀င်ရောက်၍ လာခဲ့ပေပြီ..။ ထို့ကြောင့် ယခုပြဿနာ၏မူလ စီဆင်းရာ အဓိကတရားခံသည် ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ ဘာမားကမ်ပိန်း (ယူကေ)တို့ပင် ဖြစ်သည်၊ ရိုဟင်ဂျာကုလားများသည် သူတို့ဗလီ ဆရာများ အသတ်ခံရသည်ကို မကျေနပ်၍ သာမာန်ဆူပူသောင်း ကျန်းသည်မဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျ လက်နက်ကိုင်၍ စစ်သွေးကြွပုံစံမျိုး တပ်မတော်ကို ပြန်တိုက်သောအခါ ယခုပြဿနာသည် လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်သာ ဆိုင်သည့်ပြည်တွင်းရေးပြဿနာမဟုတ်တော့ဘဲ မန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ကိုသာမက လူမျိုးနှင့် ဘာသာတရားကိုပါ စော်ကားလာသောပြဿနာဖြစ် လာပေရာ အများဘာသာ၊ သာသနာအတွက် လူမျိုးခြားမိစ္ဆာကုလားများကို မြန်မာ့မြေမှ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်ပါမကျန် ရှင်းလင်းပစ် ရမည့် သမိုင်းပေးတာဝန် ကျရောက်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်
ရဟန်းရှင်လူ၊ အစိုးရ၊ အတိုက်အခံများအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် တိုက်ထုတ်သင့်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း
ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူရာသွင်းပေးခဲ့တဲ့ ဟန်ညောင်ရွှေကိုပါ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါသည်၊